အများပြည်သူသိရှိရန်အသိပေးနှိုးဆော်ချက် - Food and Drug Administration, Myanmar
၁။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသည် အရည်အသွေးစစ်မှန်ကောင်းမွန်ပြီး၊ ဘေးဥပါဒ် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းကာ အကျိုးအာနိသင်ရှိသောဆေးဝါးများကို အများပြည်သူတို့သုံးစွဲနိုင်ရန် စနစ် တကျစိစစ်ကွပ်ကဲကြပ်မတ်လျက်ရှိပါသည်။
၂။ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ဈေးကွက်အတွင်းရှိ ဆေးဝါးများ ကိုစိစစ်ခဲ့ရာ အောက်ဖော်ပြပါဆေးဝါး(၈)မျိုးသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော တရားမဝင်ဆေးဝါးများဖြစ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်-
၁။ Regenta Eye/Ear Drops (Gentamicin Sulphate IP eq.to Gentamicin 0.3%w/v, Methyl-Paraben Sodium IP 0.1%w/v
(as preservative), Sterile Aqueous Base IP q.s) Regain Laboratories
၂။ Phenolphthalein Tablets (Phenolphthalein 50mg) CS Pharmaceutical Co., Ltd, China
၃။ Ninazol Tablets (Ketoconazole 200mg) T.O. Pharma Co., Ltd, Thailand
၄။ Piyenchin Solution (Naphazoline HCl Solution 1:1000) YYJW Pharmaceutical (China) Co.,Ltd
၅။ Compound Miconazole Nitrate Cream (Miconazole Nitrate 20mg, Clobetasol Propionate 0.5mg/g) Hubei KZ Pharmaceutical Co., Ltd
၆။ Chlorpheniramine Tablets (Chlorpheniramine Maleate 4mg) K.B. Pharmaceutical Co., Ltd., Bangkok
၇။ Diclo-M Tablets (Diclofenac Sodium IP 50mg, Paracetamol IP 300mg, Magnesium Trisilicate IP 100mg) VIP Pharmaceuticals Pvt. Ltd. Distt Solan-174101(H.P)
၈။ Oxytocin Injection (Oxytocin USP 10 IU/ ml) Amros Pharmaceuticals, Pakistan
၃။ အများပြည်သူများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော ဆေးဝါးများကို ဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်းမပြုကြရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ရရှိထားသောဆေးဝါးများကို ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်ဝယ်ယူသုံးစွဲပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက် စောင့်ရှောက်မှုဆောင်ရွက်ပေးသူများအနေဖြင့် မိမိတို့သုံးစွဲနေသည့် ဆေးဝါးများနှင့်ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်ဖွယ်တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက သတင်းပေးပို့အကြောင်းကြားနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ် ပါသည်။
၄။ ဆေးဝါးတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးသည့်ကုမ္ပဏီ၊ ဆေးဝါးရောင်းချသည့်ဆေးဆိုင်များသည် မြန်မာ နိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသောဆေးဝါးများ၊ ဆေးဝါးအတု၊ စံမညီဆေးဝါးများကို တင်သွင်း ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း (လက်လီ/ လက္ကား) လုံးဝမပြုရန်နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းက အမျိုးသားဆေးဝါးဥပဒေပုဒ်မ(၁၈)အရ တရားစွဲဆိုအရေး ယူမည်ဖြစ်ပါကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်။
← Infant Formulaများအားပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်းတို့တွင် Breast Milk Substitute (BMS) Order အားwebsite တွင်ဖော်ပြပေးနိုင်ပါရန်ပေးပို့ခြင်း
Domestic Factory – Processing Flow Chart →